शुक्रबार, असोज १५, २०७८ NB Media Network
हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । प्रहरी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल प्रहरीले कञ्चनपुरका विभिन्न इलाकाहरूमा पनि तपाईँको मास्क खोई ? अभियान सञ्चालन गरेको छ । यसैबिच, कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीले शुक्रबार पुनर्वासमा तपाईँको मास्क खोई ? अभियानको एक औपचारिक कार्यक्रम गरी शुभारम्भ गरेको । पुनर्वासको आईबिआरडी बजार स्थित सहिद गेट चोकमा पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा नागरिकहरूलाई प्रहरीले मास्क वितरण गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापाले आम नागरिकलाई अत्यावश्यक कामकाज बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र भिडभाड नगर्न अनुरोध गर्दै घरबाहिर निस्कँदा सधैँ मास्क लगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने कुरा नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो । कोभिड १९ को सङ्क्रमण जोखिम अझ कायमै रहेको हुँदा प्रहरीले शुक्रबारदेखि तपाईँको मास्क खै ? अभियान सञ्चालन गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्टले बताउनु भयो ।
चाडपर्वको समयमा नागरिकहरुको भिडभाड बढ्ने र कोभिड १९ सङ्क्रमणको जोखिम समेत बढ्दै जाने हुँदा प्रहरी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हरेक नागरिकलाई मास्क लगाउन प्रेरित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रहरी निरीक्षक बिष्टको भनाइ छ । उक्त अभियानमा सँगसँगै नेपालले समेत सहयोग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले यही असोज २० गतेसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी प्रहरी दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १५, २०७८, १९:३९:००